AMISOM oo miino kula qaraxday gobolka Hiiraan. – The Voice of Northeastern Kenya
AMISOM oo miino kula qaraxday gobolka Hiiraan.
Waxay Faahfaahino dheeraad ah kasoo baxayaan qarax miino oo lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen Ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalka Ethopia oo marayay gobolka hiiraan ee Bartamaha dalka Soomaaliya.
dadka degaanka ayaa xaqiijiyay inuu jiro Khasaare soo gaaray Ciidanka dowladda Itoobiya ee Qaraxa lala eegtay.
Qaraxan ayaa Ciidamada waxaa lagula eegtay degaanka lagu magacaabo Ceelgaal oo ku yaala duleedka Magaalada Baledweyne, halkaasi oo ay marayeen.
Dadka degaanka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay sheegay in Ciidamada qaraxaan lala eegtay ay ku sii jeeday gudaha dalka Itoobiya, waxayna markii hore ka ambabaxeen Magaalada Buulo burde ee isla gobolkaasi hiiraan muddo ayayna wadada ku sii jireen.
Inta badan ururka Al Shabaab ayaa wadooyinka ay isticmaalaan Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya waxaay u dhigaan Miinooyinka dhulka lagu aaso wallow aysan qaraxaan cidna masuuliyadiisa sheegan.
Dhanka kale wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in Ciidamada Xoogga Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Galmudug ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhanka xoogaga Al-Shabaab ee ku sugan degmada Xarar-dheere ee Gobolka Mudug.
Todobaadyadii aan ka soo gudubnay waxaa Gobolkaasi Mudug ka jiray baaqyo iyo abaabul ku aadan sidii Al-Shabaab looga saari lahaa degmada Xarar-dheere iyo deegaanada ku dhow,waxaana ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ay samaynayeen dhaqdhaqaaqyo arintaasi ku saabsan.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa shalay gaaray deegaano hoostaga degmada Xarar-dheere waxayna halkaa ka bilaabeen dhaq dhaqaaq ciidan oo Al-Shabaab looga saarayo goobaha ay ku sugan yihiin.
Degmada Xarar-dheere ee Gobolka Mudug waxaa muddo dheer gacanta ku haya xogaga Al-Shabaab, saraakiisha Ciidamada xoogga iyo kuwa Galmuudg ayaana sheegeen inay ka saari doonaan magaaladaasi.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kal hore ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Al-Shabaab wallow uusan howlgalkaasi wali bilaaban waxaana jira deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkada Soomaaliya oo ciidanka xooggu kala wareegeen AL-shabaab.
← DHAGEYSO Barnaamijka Madasha,Ganacsiga 29-10-2018
Ra’isulwasaaraha Soomaalya oo gudiimiyay shirka dhaqaalaha xukuumada. →